Qiimaheena waa isbadali karaan iyadoo kuxiran sahayda iyo waxyaabaha kale ee suuqa yaala. Waxaan kuu soo diri doonnaa liis qiimeyn casriyeysan ka dib shirkaddaada nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa qiyaastii 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan helnay ogolaanshahaaga ugu dambeeya ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan la jaanqaadno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Waxaad ku bixin kartaa lacagta akoonkeena bangiga, Western Union ama PayPal:
Ma dammaanad qaadeysaa inaad alaab ammaan ah oo ammaan ah keeneyso?
Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal, mashiinka qodista hdd, mashiinka qodista ceelka, HDd rig,